DemoChimp: gbanye akpaaka gị | Martech Zone
DemoChimp: gbanye ihe ngosi gị
Nweta DemoChimp nọ na beta ugbu a ma ọ na-achọ òtù ndị nwere mmasị iji ọrụ ha. DemoChimp na-ahazi ngosipụta ngwaahịa, na-abawanye ọnụego mgbanwe weebụsaịtị gị yana ngọngọ gị imechi n'oge usoro ahịa, oge niile ị na-achịkọta ngwaahịa. nchịkọta. DemoChimp na - ahazi ngosipụta na - arụ ọrụ na nzaghachi maka mkpa pụrụ iche ọ bụla, dị ka ọkaibe n’ahịa.
DemoChimp Atụmatụ na Uru:
Gbanwee ọtụtụ ndị ọbịa na-eduga - Ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-edebanye aha mgbe ha na-emekọrịta ọdịnaya nke ahaziri iche. Mgbe ndu gị batara, ị ga-ahụ ihe akụkụ ngwaahịa gị dị ha mkpa na akụkụ ndị na-abụghị ka ị nwee ike ịhazi usoro gị.
Ọgụgụ isi Ngosipụta ọgụgụ isi - you nụtụla arịrịọ ahụ, "you nwere ike iziga m ngosi?" Ugbu a ị nwere ike, na DemoChimp na-eji akpaghị aka dozie ngosi ahụ ka ọ na-aza maka ọdịmma nke atụmanya, na-eme ka ọ dị ka onye na-ere ahịa ndụ. Nwekwara ike ịhụ onye ha kesara ngosi ahụ na nzukọ ha ka ị wee nwee ike ịchọpụta ma tinye aka na ngalaba ịzụ ahịa niile.
Nweta Demo Analytics (Demolytics ™) - N'azụ Mpaghara, DemoChimp na-achikota data bara uru dabere na nzaghachi na omume nke atụmanya ahụ n'oge ngosi. Anyị na-akpọ ndị a Demolytics ™. Nweta ndị a nchịkọta site na nkwekorita ma obu dichapu rue olile anya di iche.
Tags: ngwa ngosingosi ngosingosidemosngwaahịa ngosipụta n'elu ikpo okwungwaahịa demosahịa ngosingosipụta ahịa
10 Ndiiche dị n’etiti Omuma na Social Media Marketing
Ọkt 15, 2013 na 8:24 PM
Daalụ maka nke a. Anọ m na otu mmalite ma na-emekọrịta ihe na onye na - eweta mmalite teknụzụ nwere ike ịba uru na ụzọ abụọ.